बतासले पठाएको ८ बूँदे ‘नोट’ सारेर ‘कोषका अनुसार’ लेख्दै बाइलाइन समाचार – MySansar
हाम्रा पत्रकारहरुले बाइलाइन समाचार लेख्दा पनि कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण फेला परेको छ।
कुरा बतास समूहको हो। सुरुमा मिडियाले एकोहोरो खेदेका थिए बतासलाई। त्यसपछि लो प्रोफाइलमा बस्ने बतास आफै मिडिया-मिडिया धाएर अन्तर्वार्ता दिएर माहौल आफ्नो पक्षमा ल्याए। हाम्रो मिडिया उही हो फेरि, बोल्न खप्पिस बतासलाई मिडियाले राम्रोसँग प्रश्न सोध्न पनि सकेन। बतास त व्यापारी हो, उसले त नाफा हेरी हाल्छ नि, दिने पो दोषी भन्ने धारणा बनाउन उनी सफल भए। तर उनको पनि कमजोरी के-केमा रह्यो, त्यो बारे अलग्गै ब्लगमा लेखौँला। यहाँ भने पत्रकारकै कुरा गरौँ।
निकै सक्रिय भएर मिडिया क्याम्पेनिङमा लागेका बतासले केही सम्पादक र निकट पत्रकारहरुलाई ४३ पेजको १२ एमबीको एउटा फाइल पठाएका थिए।
ती मध्येकै एक जनामार्फत् मैले पनि त्यो फाइल हेर्न पाएँ। यहाँ क्लिक गरी त्यो फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो फाइलको सुरुमा पशुपति धर्मशालाबारे बतासको ८ बूँदे ‘नोट’ थियो।
माघ १२ गते सेतोपाटीमा खिलानाथ ढकाल र युवराज श्रेष्ठको संयुक्त बाइलाइनमा एउटा समाचार राखियो। ‘बतासमाथि कारबाही, धर्मशाला ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई भने पुरस्कार’ शीर्षकको यो समाचारको अर्काइभ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
समाचार पढ्दै जाँदा ‘यसरी लगाइयो भाडा’ सबहेडिङमा राखिएका सबै समाचार बतासको ८ बूँदे नोटको हुबहु सारिएको रहेछ। तर समाचारमा ‘बतासका अनुसार’ नलेखी ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार’ लेखिएको रहेछ। यसरी बतासले दिएको जानकारीलाई कोषले दिएको जानकारी भनेर किन लेख्नु? बतासले नै भनेको भनेर लेखे के बिग्रने रहेछ? कुरो बुझिएन।
यस्तो छ सेतोपाटीमा छापिएको अंश। माथि बतासको नोट पनि छ, भिडाएर हेर्नुस्-
बतासकै नोट सारेर बाइलाइनमा समाचार लेखिएछ त। कति रमाइलो !
त्यसो त बतासले पुस २८ गते विज्ञप्ति निकालेर आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कानुनी कारबाही नगर्न सरकार समक्ष र स्पष्टीकरण नलिन, दबाब नदिन मिडियाका सञ्चालक, प्रकाशक र सम्पादकहरुलाई अनुरोध गरेको थियो।
हेर्नुस् विज्ञप्तिको अर्काइभ
पत्रकारहरुले आफूहरुलाई यति विधि माया गरेको देखेर बतासको ८ बूँदे नोट जस्तातस्तै सारेर उनलाई कतै बात नलागोस् भनेर अझ माया गरेर ‘कोषका अनुसार’ लेख्दै समाचार छापिदिएका पो हुन् कि ! कुरो बुझिएन। यो देशमा धेरै कुरा नबुझेरै आधा जिन्दगी खेर जाने भो।